Waa maxay sababta ay Arsenal u jeclaan laheyd in Matthijs de Ligt uu ku biiro Barcelona? Xog qarsoon oo la baahiyay. – Gool FM
(London) 25 Maajo 2019. Wali waxaan la ogeyn dhinaca uu aadi doono da’yarka kooxda Ajax Matthijs de Ligt kaas oo ay si weyn u doonayaan kooxaha waaweyn ee qaaradda yurub, balse kooxda ka dhisan London ee Arsenal ayaaba jeclaan laheyd inuu Barcelona ku biiro.
Xiddiga reer Holland waxaa isku heysta kooxaha Man United, Liverpool iyo Barcelona, sidoo kalana Paris Saint Germain iyo Bayern Munich ayaan ka marneyn, waxaana ugu cad-cad sida warbaahinta qaar ay qorayaan kooxda ka dhisan garoonka Camp Nou.
Wax walba ayaa suuqa iska badali kara, Matthijs de Ligt wuxuu jeclaan lahaa iney mar kale isku koox noqdaan Frankie De Jong oo goor hore ka mid noqday kooxda Balaugrana, sida warbaahinta Ingiriiska kashifeen Arsenal hal sabab ayey u dooneysaa inuu xiddigaan ku biiro Barcelona.
Arsenal faa’iidada ay ku qabto in daafaca reer Holland uu ku biiro Barcelona waxey tahay ineysan dhib badan u mari doonin helitaanka xiddiga ay bartilmaameedka ka dhigeen ee Samuel Umtiti kaas oo isaga hayaami doona garoonka Camp Nou.
Clement Lenglet ayaa hadda dooqa koowaad ah kaas oo ku lamaansan Gerard Pique, balse daafaca reer France wuxuu kalsooni ku qabaa inuu kalsoonidii kooxda dib usoo ceshan doono isla markaana boos joogto ah heli doono, hadii la keeno De Ligt arrintu waxey noqon kartaa mid ku cakiran.
Matthijs de Ligt wuxuu u dhashay inuu hogaamiye noqdo, 19-jir isagoo ah ayuuna kooxda Ajax ka muteystay inuu majaraheeda qabto, waxaana la sugi doonaa halka uu mustaqbalkiisa ku dambeeyo.